I-Penthouse enombono ocacileyo woLwandle kwindawo egqibeleleyo - I-Airbnb
I-Penthouse enombono ocacileyo woLwandle kwindawo egqibeleleyo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMehmet Nafiz
Ngaba ungathanda ukuhlala ngokugqibeleleyo kwindawo yepeninsula eyimbali yaseIstanbul?
Olu bhukisho lubonelela ngendawo yoyilo exhobe ngokupheleleyo eTaksim, ngaphaya kombono weGolden Horn.Ime kwimizuzu nje embalwa ukusuka kwisitalato esidumileyo sase-Istiklal, ubomi basebusuku, uhambo loluntu, iindawo zembali kunye nazo zonke iimyuziyam ezidumileyo.
Ngevenkile yekofu yesi-3 kwi-lobby, inkonzo yokucoca imihla ngemihla kunye noncedo lomntu kuzo zonke iintlobo zeemfuno ze-concierge, le ndlu yenzelwe ukwenza iholide yakho ikhumbuleke!
Eli ligumbi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nekhitshi elibandakanya iitops zesitovu, imicrowave, ifriji encinci, iketile, itoaster, ikofu / umenzi weti kunye nezinye ezininzi. Izindlu zokuhlambela ezi-2 zabucala zibandakanya isomisi seenwele, izinto zangasese, iitawuli kunye neslippers.Iilinen ze-cotton bed ze-organic zinikezelwa kumagumbi okulala. Indlu icocwa yonke imihla ngokwesicelo sakho.Kwizinto zakho zexabiso, unokuhlala usebenzisa iibhokisi zediphozithi zokhuseleko lwe-elektroniki. Isantya esiphezulu se-WIFI sinikezelwa simahla ngelixa i-smart tv ibonelela ngeNetflix, iYouTube, iAmazon Prime kunye nokunye.Ukuba ufuna ukucima kwaye ubambe umzuzu, unokuhlala uphumla imilenze yakho kwibhedi epholileyo kwaye ukonwabele umbono ongabekekiyo weGolden Horn kunye neDolophu endala kwifestile yepanorama.
Le ndlu ifumaneka kwimizuzu eli-10 kude neTaksim Square kunye nemizuzwana engama-30 ukusuka kwisitalato esidumileyo sase-Istiklal, elikhaya lamakhulu eevenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, imivalo, iivenkile nokunye.Ungafumana imyuziyam edumileyo yasePera ngakwicala elinye ngelixa i-Istanbul Modern yimizuzu nje embalwa yokuhamba, ukunqumla eyona Ndlu inkulu yeSoho emhlabeni.Kuthatha kuphela i-9 min entle. Hamba kwizitrato zembali zeBeyoglu ukuya kwiGalata Tower, eyona nqaba indala yokhuselo yase-Istanbul eyakhiwa ngenkulungwane ye-14.Ibhotwe laseTopkapı, iMosque eBlue, iHagia Sofia, iGrand Bazaar kunye nazo zonke ezinye izinto ezintle zembali zesi sixeko sikhulu kukuhamba ngemoto imizuzu eli-15 kuphela kunye nemizuzu engama-25 ngohambo loluntu.Ukutyelela i-Bosporus engalibalekiyo okanye ukutyelela kwicala lase-Asia edolophini, kuthatha kuphela i-10-minute yokuhamba ukuya kwi-short port.Okokugqibela kodwa kuncinci, unokufumana amava obomi bobusuku bokwenyani bendawo ekufutshane nekona.
Umbuki zindwendwe ngu- Mehmet Nafiz
Oogxa bam kunye nam sikwinkonzo yakho 24/7 ngalo naluphi na uhlobo loncedo lomntu ngexesha lokuhlala kwakho; nokuba ufuna isithuthi sabucala, iingcebiso zasekhaya, ukubhukisha kwiindawo okanye ngenye indlela.